ကားတစ်စီးကို Dealer နဲ့ဝယ်မလား (သို့) Auto Broker နဲ့ဝယ်မလား? ဘယ်ဟာကပိုသင့်တော်လဲ? – AutoMyanmar
ကားတစ်စီးကို Dealer နဲ့ဝယ်မလား (သို့) Auto Broker နဲ့ဝယ်မလား? ဘယ်ဟာကပိုသင့်တော်လဲ?
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် Car Dealer (သို့) Auto Broker အစရှိတဲ့ အစီအစဉ်နှစ်မျိုးတည်းက တစ်မျိုးနဲ့တော့ဝယ်ယူရမှာ အသေအချာပါပဲ။ အစီအစဉ်နှစ်မျိုးတည်းက ဘယ်အစီအစဉ်က ပိုပြီးကောင်းမွန်လဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အစီအစဉ်က ပိုကောင်းလဲမပြောခင် Car Dealer နဲ့ Auto Broker တို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုဉီးဆုံးဖွင့်ဆိုပါရစေ။
Car Dealer ကတော့ မိတ်ဆွေကိုရောင်းချပေးမယ့် ကားကိုယ်စားလှယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ Car Showroom ပါ။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ မိတ်ဆွေကို ချိုချိုသာသာနှုတ်ဆက်မယ်၊ မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ကားအမျိုးအစားအကြောင်းတွေ၊ ရွေးချယ်နိုင်မယ့်စျေးနှုန်းအကြောင်းတွေ၊ အာမခံအပိုင်းတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Auto Broker ပါ။ Auto Broker ကတော့ ကားလောကမှာကျင်လည်နေတဲ့ လူ ပြောရရင် ကားပွဲစား ဖြစ်ပြီး ကားစျေးအတက်အကျ ကိုတော်တော်လေး နားလည်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Auto Broker ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ ကားဝယ်မယ့် ကိစ္စအစကနေ အဆုံးအထိကို လိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပေးမယ့် သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Car Dealer နဲ့ Auto Broker တို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိပြီးပြီဆိုတော့ နှစ်ခုရဲ့အားသာချက်တွေကိုဖော်ပြပါရစေ။ Car Dealer နဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ –
– သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တစ်ချိန်တည်းမှာ အကုန်သိနိုင်မယ်။
– Showroom ကိုကိုယ်တိုင်သွား/ ကားကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးဝယ်ယူရတာဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာမယ်။
– Dealer တွေက ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Option တွေအားလုံးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်တိုင်သတိမထား မိတဲ့ option အသစ်တွေကို သိလာမယ်။
– နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး ကားရဲ့ကြံခိုင်မှုနှုန်းထားကိုသိရှိဖို့ Test Drive လုပ်နိုင်တာကြောင့် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူမယ်။
Car Dealer အတွက်ပြီးပြီဆိုတော့ Auto Broker နဲ့ ဝယ်ယူရင်ရရှိမယ့် အားသာချက်တွေကိုလည်း တစ်ချက်ရှိုးရအောင်လား… Auto Broker နဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ –
– စိတ်ကြိုက် Showroom မတွေ့မချင်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းရှာရတဲ့ ဒဏ်ကနေ ကင်းလွတ်မယ်။
– အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ Car Broker ကဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာမယ်။
– ကားလောက မှာကျင်လည်နေသူဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းပိုင်းသိနားလည်နေသူတစ်ဉီး ကဉီးဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် စျေးနှုန်းပိုင်းဂျင်းထည့်ခံရမှုရန်ကနေကင်းလွတ်မယ်။
– ကားပွဲစားဖြစ်တဲ့အလျှောက် ဆက်ဆံရေးကကောင်းမွန်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အဲ့လိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ပဲ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကားရဲ့လျော့စျေးတွေကိုပါ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက်တွေလည်း ပြောပြီးပြီဆိုတော့ ဆောင်းပါးရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ Car Dealer နဲ့ Auto Broker မှာဘယ်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတဲ့ ဘက်ကိုသွားပါရစေ။ ဘယ်အစီအစဉ်ကောင်းတယ်ဆိုတာက မိတ်ဆွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် အများကြီးမူတည်သွားပါပြီ။
မိတ်ဆွေဟာ ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအနည်းအငယ်နဲ့ စျေးနှုန်းပိုင်းကို သိနားလည်သူတစ်ဉီးဖြစ်ပြီး အချိန်ပါပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Car Dealer တွေဆီမှာသွားရောက်ဝယ်ယူတာအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လျော့စျေးတွေရချင်ရင်တော့ Dealer တွေကကျင်းပတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကို စောင့်ပြီးမှဝယ်ယူဖို့ အကြုံပြုပါတယ်။ (Dealer တွေရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေရဲ့ သတင်းတွေကို Automyamar ကလည်း မလွတ်တမ်းတင်ပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ😄)
အကယ်၍မိတ်ဆွေဟာ ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အကျွမ်းတဝင်မရှိသူ စျေးနှုန်းပိုင်းဆိုရင်ပိုဆိုး (😂) အချိန်လည်း မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ Auto Broker နဲ့ဝယ်ယူမယ့်အစီအစဉ်က အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Auto Broker တွေထဲမှာမှ မိတ်ဆွေပြောလို့ ဆိုလို့ ကောင်းတဲ့ အသိမိတ်ဆွေ (သို့) ယုံကြည်ရသူကိုသေချာရွေးချယ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ခံစားရမယ့် အားသာချက်တွေကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။ 😁)
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက ကားစတင်ဝယ်ယူမယ့် သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနောက် ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာပြန်တွေ့ပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
Auto Broker, Car Dealer